Orinasa madinika – PME: olana goavana ny tsy fahampian’ny famatsiam-bola | NewsMada
Orinasa madinika – PME: olana goavana ny tsy fahampian’ny famatsiam-bola
Hanao fampisehoana, mandritra ny roa andro, ny 3 sy 4 aogositra izao ao amin’ny Carlton, ireo orinasa madinika sy salantsalany (PME), karakarain’ny Club entrepreneurs étudiants du rendez-vous des entrepreneurs (CEER). Hampahafantarina amin’io fotoana io ny tontolon’ny PME eto amintsika, ny olana sy ny andrasan’izy ireo. Navoitran’ny filohan’ny CEER, i Herimanarivo Gilberto, ireo olana amin’ny ankapobeny, “indrindra ny fitadiavana famatsiam-bola hanatevenana ny orinasa sy ny fitadiavana tsenam-barotra. Tsy ampy amin’ny PME ny tohana sy ny fiaraha-miasa momba izany”, hoy izy.
Ny PME anefa, misy manodidina ny 3 000 manerana ny Nosy, antoka iray lehibe ho fampandrosoana ny toekarena, saingy tsy ampy tosika sy takon’ireo ivelan’ny ara-dalàna (informels) izay tena mbola maro anisa ihany koa.
Raha tsiahivina, efa nisy fampiofanana sy atrikasa tany aloha, ny 2015 sy ny 2017, notarihin’ny Procom*, nandinihana indrindra ny hoe “ahoana ny fomba hanohanana ny PME eto Madagasikara”? Nantsoina nandray anjara ny Antenimieran’ny varotra, ny vondron’ny mpandraharaha, ny fikambanana samihafa. Nefa toa lasa resaka ambonin’ny latabatra fotsiny izany raha ny fahitana ny fahasahiranan’ireo PME sy nihaino ny filohan’ny CEER, ary izao mbola hisy fanentanana vaovao izao indray.
Hifarana amin’ny 2019 ny Procom
Olana goavana hatramin’izao ny tsy fahampian’ny famatsiam-bola. Efa nisy ihany ny fanohanan’ny Procom, nomen’ny Vondrona eoropeanina valo tapitrisa euros, saingy vitsy ny PME nahazo tamin’izany. Hifarana amin’ny 2019 anefa io fandaharanasa Procom io. Manao tolotra amin’izany famatsiam-bola izany koa ny banky BNI amin’ny alalan’ny fifaninanana TJE, saingy iray na roa ihany, ho an’izay voafidy, no mahita tombony. Eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ity fampisehoana ao amin’ny Carlton ity. Koa andrasana izany ny anjara birikin’ny fanjakana, nametraka rahateo ny politika fiaraha-miasa amin’ny tsy miankina na ny 3P.